Momba anay - Shenzhen Kaz Circuit Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2007, KaiZuo Electronic (izay antsoina hoe KAZ) dia mpamatsy matihanina sy avo lenta an'ny Electronic Manufacturer Service (EMS) avy any Shina. Miaraka amin'ny mpiasa efa za-draharaha 300, KAZ dia afaka manome serivisy fijanonana iray ho an'ny mpanjifa ao anatin'izany ny PCB manufacturing, Components Sourcing, PCB Assembly, Cable Assembly, Box Building, IC Programming, Functional and Aging Testing. Voamarina amin'ny ISO9001, UL, RoHS, TS16949.
Fitaovana SMT haingam-pandeha 5, milina fanontam-pirinty mandeha ho azy (DSP1008), tsipika famokarana haingam-pandeha haingam-pandeha MIRAE MX200, fitaovana YAMAHA (YS24 / YG12F ...), fampidirana solika (NS-1000), fitaovam-pitsapana AOI (JTA -320-M), fitaovana fanaraha-maso X-Ray (Nikon AX7200), tsipika famokarana 2 DIP ary soldering onja Nitto.
Rehefa avy nifantoka tamin'ny serivisy mpanamboatra elektronika nandritra ny 13+ taona i KAZ dia nanangana mpanjifa miara-miasa & afa-po maharitra manerana an'izao tontolo izao. Amin'ny ankapobeny dia avy any Amerika Avaratra, Eropa, Azia ary Aostralia. Fampiharana fampiharana anisan'izany ny fanaraha-maso indostrialy, IT / Networking, IoT, fiarovana, fiara, elektronika herinaratra, elektronika mpanjifa, jiro, sns.
Amin'ny alàlan'ny famandrihana afovoany ny fividianana ara-pitaovana, ny fanangonana afovoany ny mpanjifa marobe miaraka amin'ny fitaovana iray ihany, ary ny fanangonana fitaovana marobe mitovy toetra aminy, ny bainga mitambatra dia napetraka ho antsika amin'ny fiaraha-miasa maharitra. Aorian'ny fanaraha-maso henjana dia afaka mahazo fampahalalana bebe kokoa amin'ny mpamatsy isika miaraka amin'ny antoka ara-kalitao. Ny vidiny tsara sy ny fandefasana tsara kokoa.
Mandritra izany fotoana izany dia faly izahay mamindra an'io kalitao io amin'ny mpanjifanay ary manampy azy ireo hanatsara ny fifaninanana amin'ny fifaninanana tsena masiaka ankehitriny, satria fantatray tsara fa ny fahaveloman'ny mpanjifa no fahavelomantsika; fampandrosoana ny mpanjifa no fampandrosoana antsika. Miaraka amin'ny orinasa PCB sy SMT antsika manokana, ny vidin'ny ex-factory sy ny fotoana, manala ny rohy antonony, ny vidiny ambany ary ny fahombiazany avo. Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny fanohanan'ny ekipa matihanina R&D anay, afaka manome mpanjifa fanatsarana programa izahay hanampiana ny mpanjifa hampihena ny vidiny na hanafohezana ny fotoana fandefasana.
"Ny kalitao no lalan'aina." Nahazo ny fahatokisan'ny mpanjifa izahay amin'ny kalitao sy laza tsara eo amin'ny sehatry ny indostria.
Ny fifehezana ny kalitao dia manondro henjana ny rafitra fitantanana kalitao ISO. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fizotry ny famokarana tsirairay, ny famokarana SOP dia namboarina mba hanamorana ny fampiharana ny mpiasa mba hialana amin'ny lesoka azo sorohina.
Amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fanaraha-maso maso an-tsary sy ny masinina ary ny fifehezana ny fizotrany, manome ny mpanjifa vokatra mifanaraka amin'ny takian'ny kalitaon'ny mpanjifa izahay.